Haddii Musuq maasuqa,dad lagula xisaabinayo, maa laga bilaabo….. =Nasashada Jimcaha..Q-108-aad= - Warka gudaha Somaliya - Local News in Somalia
Home WARKA GUDAHA Haddii Musuq maasuqa,dad lagula xisaabinayo, maa laga bilaabo….. =Nasashada Jimcaha..Q-108-aad=
Haddii Musuq maasuqa,dad lagula xisaabinayo, maa laga bilaabo….. =Nasashada Jimcaha..Q-108-aad=
1-Nin Cudur halisa qabo, oo dhakhaatiirtii ka quusteen, ayaa si niyadda loogu dhiso, waxaa lagu yiri: Aduunku 2019 ayuu dhamaanayaa. Ninkii xanuusanaa ayaa yiri: waa beentiin ma dhamaanayo 2019.
Waxaa lagu yiri: Sideed ku ogaatay?. Ninkii xanuusanaa ayaa yiri: waxaan ku ogaaday kaniiniga aan cunaayo waxa uu dhacayaa sannadka 2020, kaniiniga ii haryo ma Aakhiro ayaa lagu cunayaa? !.
( Musharax niyada loo dhisayo ayaa lagu yiri: sannadka 2020 somaliya waxaa ka dhacaya doorasho Hal qof Hal cod ah, waxa uu yiri: ma dhici karto, sabta oo ah weliba dadka lama tira koobin, Dastuurkiina waa qabyo, waxaaba ka sii daran..………)
2- Shinni ayaa hadda ka hor isugu yeertay dad Tuulo degenaa, waxayna u sheegtay inay tegeyso oo ay soo Sahansatay meel kale.
Dadkii Tuulada oo uu hor socdo Nabadoon: Moha Nasiib, ayaa ku calaacalay Shinidii waxayna u sheegeen muhiimadda ay bulshada u leedahay iyo in ay tahay halka kaliya oo ay Malabka ka helaan.
Shinnidii oo tix-gelineysa codsiga dadweynaha ayaa aqbashay in ay joogto, oo ay shaqadeeda sii wadato.
Tisxi(duqsi) oo arkayay sidii ay dadku ugu calaacaleen Shinnida ayaa maalintii xigtay dadkii isugu yeeray, wuxuuna ku yiri: waxaan soo arkaday meel fiican, waxaana tagayaa, waxaan idinka codsanayaa in aad iga aqbashaan codsigeyga.
Dadkii si aqlabiyad ah ayey u aqbaleen in uu iska tago Tixsigu, waliba waxay u sheegeen in ay duco ugu darayaan. (Fiiri Sawirka: 1aad)
(Waxaan arkay madaxweyne maamul Gobaleed oo dadkii ku leh: waxaan idinka codsanayaa in aan idinka tago, waan ka xumahay waqtigaan oo aad ii baahantihiin, doorashana soo dhawdahay, in aan idinka tago. Si aqlibiyad ah ayaa looga aqbalay in uu iska tago, waana loo duceeyay haddiiba uu iska tagayo. Laakin wuu diiday in uu Aamiin yiraa)
3-Guuleed oo Dukaan weyn ku lahaa magaalada Gaalkacyo ayaa dadka ka adeegta Dukaankiisa waxaa uu u furay Buug deynta lagu qoro, si bisha dhamaadkeeda ay isaga bixiyaan. Guuleed waxa kale uu ahaa Imaamka Masjidka Gaalkacyo.
Khudbadii Jimcuhu markii ay dhamaatay ayuu dadkii wacdiyay, waxa uuna yiri : Qof kasta wixii wanaag iyo xumaan ay sameyso Buug ayaa lagu qorayaa Aakhiraana waa la xisaabinayaa. Kadibna ducadii ayuu bilaabay. Wuxuuna yiri: Allow inta jiran caafi, inta deynta lagu leeyahay, deynta ka Cafi .
Intaa markii uu marayo ayaa nin kor u qayliyay kuna yiri: “Shiikh Guuleedoow hadaad run sheegee buugii deynta ee Dukaankaaga, adaa hayo ee maad deynta naga tirtid “. (F.S: 2aad)
( Haddii Buugaagata Musuq maasuqa, dad lagula xisaabinayo, maa laga bilaabo Buuga weyn iyo khasnadaha Madaxda Dowlada ) F.S: 3aad)
4- Oday Cumar oo Geel laga soo xaday ayaa magaalada yimid si uu suuqa uga raadiyo. Isaga oo daalin ayuu habeenkii seexday darbi suuqa u dhaw, wuxuuna ku riyoonayay Ratigii ka maqnaa, waxaa soo ag fadhiisaty Gabar iyo wiil, waxa uuna maqlay wiilkii oo leh: Macaanto, markii aan ku arko Aduunka oo dhan kuligii ayaa la i hor keenaa jaceeylkaaga dartiis. Oday Cumar ayaa inta uu soo booday ku yiri: Igaarkeey haddii aduunyada oo dhan lagu horkeenay, Geeleygii amaad aragtay?. F.S: 4aad.
(Haddii hay’adaha amniga oo dhan lagu hoos keenay, Kii macalin Giriig ,maqaayada ku qarxiyay 5/8/2018 meel ku sheeg). Macalin Griig AUN, shaqadii qaranka 1978 ayaa Dugsa H/Dhexe Hodon ka wada shaqeey jirnay).
5-Nin luqada Ingriiska baranayay ayaa loo soo dhigay Cashar ah “your Husband and your Wife”, (Ninkaaga & Xaaskaaga). Koo deriskiisa ah ayuu ka isticmaali jiray khadka Wifi –Network kiisaa, waxa uu u qoray Message wuxuna ku yiri: walaaloow iska key cafi, mar kasta waxaan kula isticmaali jiray “ your wife” weliba inta aad guriga ka maqan tahay, waxaana isticmaali jiray inta aad isticmaasho in ka badan.
Ninkii ayaa markuu akhriyay message –kii, xaaskiisii si xun u tumay, aflagaadana ugu daray, kadibna ku yiri: Saddaxdaadii oo aan rajactu leheyn ayaad iga qabtaa.
Kii oo loo soo saxay Af-Ingriiskii ayaa u soo qoray Message kale, kuna yiri: walaaloow iga raali noqo, waxaan isku Khalday Wife iyo Wifi. Maxaa yaal hee.
( Af- Somaliga si fiican u baro mudane masuul, Hadaadan macnaha wasaarad & wakaalad kala aqaanin Cidda ha kala dirin).
6-Axmad yare ayaa dukaan deriskiisa ah waxa uu weeydiisay in uu ka iibiyo “Condom” Cinjirka galmada. Dukaanlihii ayaa ku yiri: waa iga dhamaaday nuucii aad jecleed, berri ayaan mid fiican keenayaa.
Subaxdii dambe ayaa xaaskii Axmad yare waxa ay adeeg u doonatay Dukaankii diriska. Dukaanlihii ayaa ku yiri: Ninkaaga u sheeg, waan keenay Condomkii uu shalay i weydiinayay, weliba nuucii uu Jeclaa. Yaah, yaah, Adeegii maba sugin ee gurigii ayey ku soo noqotay. Kadib wixii dhacay ha i weydiin.
( Iska jir shirarka Dibadda, Ajaanibta qaar, sirta aad ku qarsato iyo heshiis hoosaadka , mar mar ayey shacabka u sheegaan, haddii shacabku ogaadna , war maa jirahee)